IPFS: Sidee loo adeegsadaa Nidaamka Faylka ee Interplanetary ee GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Xilligan, daalacashada Internetka (Cloud / Web) ku saleysan badanaa, hoosta Hab maamuuska Wareejinta Hypertext (HTTP), taas oo ah, HTTP waa borotokoolka shabakadda ee loo adeegsado adduunka in lagu baaro Shabakadda Caalamiga ah (WWW). Tan iyo markii la aasaasay (1989-1991) iyo intii ay jirtay, waxay ku yeelatay isbeddello badan ama noocyo. HTTP 1.2, ayaa xoog ku jiray 15 sano, ilaa HTTP 2, ayaa la sii daayay Maajo 2015. Waxaana suuragal ah hadda, HTTP 3 goordhow lasii daayo.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira nidaamyo kale oo cusub, hal-abuurnimo iyo xiiso leh oo ku saabsan horumarka. Mid ka mid ah ayaa ah IPFS kaas oo ku saleysan a Borotokoolka P2P hypermedia (Is-Fiir-Qof - Qof ilaa Qof), waxaana loogu talagalay inuu sameeyo deg deg, badbaado iyo furitaan furan.
Qoraal hore, oo la yiraahdo "IPFS: Nidaam Fayl Sare ah oo leh P2P iyo Teknolojiyada Blockchain" Waxaan si faahfaahsan uga faalloonaa: Waa maxay IPFS, astaamahee ayay leedahay, sidee u shaqaysaa? Sidaa darteed, waxyaabaha soo socda ayaa mudan in si kooban looga soo xigto:
"... IPFS waxay buuxin kartaa ama beddeli kartaa Protocol Transfer Protocol-ka hadda (HTTP), oo ah midka hadda fuliya gudbinta macluumaadka ee daruuraha (webka) heer caalami ah. Sidaa darteed, IPFS waxay higsaneysaa inay u beddesho howlaha hadda jira ee internetka oo ku saleysan server-yada dhexe ee shabakad si buuxda loo qaybiyey iyada oo loo marayo P2P Technology iyo Blockchain. Si markaa loo noqdo nidaam faylal la qaybiyey, oo leh hageyaal iyo faylal, kaas oo isku xiri kara dhammaan aaladaha kombiyuutarka iyo waxyaabaha dijitaalka ah, adduunka oo dhan, isla nidaamka faylka".
Dhanka kale, hadda waxaan diirada saari doonaa rakibidda iyo isticmaalka, ka Macmiilka Rasmiga ah waayo, GNU / Linux.
1 Sidee loo adeegsadaa IPFS - Nidaamka Faylka ee Interplanetary?
1.1 Ku rakibida
Sidee loo adeegsadaa IPFS - Nidaamka Faylka ee Interplanetary?
Soo dejiso macmiilka ipfs-desktop del degel rasmi ah. Waqtiga qorista maqaalka, nooca la heli karo ayaa ah 0.10.4, waxaana lagu heli karaa qaababka soo socda:
Sawirka App: ipfs-desktop-0.10.4-Linux-x86_64.AppImage
Markaad soo dejiso, kiiskeena faylka ipfs-desktop-0.10.4-linux-amd64.deb, waxaan sii wadeynaa inaan ku rakibeyno amarka soo socda:
Orod ka «Cliente de escritorio IPFS Desktop» ka menu ugu weyn, oo ku yaal qaybta internetka. Haddii aysan ku qanacsanayn, isku day inaad fuliso amarrada soo socda:
sudo dpkg –ku qaabeynta -a
Fayl u soo rar Shabakadda IPFS ka «Cliente de escritorio IPFS Desktop», laga soo qaatay qaybta "Diiwaanada" iyo adeegsiga badhanka "Kudar IPFS". Laga soo bilaabo, waad ka soo bixi kartaa faylka (yada) iyo / ama galka (yada) si toos ah kombiyuutarka ama marinka websaydhka IPFS. Iyo sidoo kale, fayl ayaa lagu abuuri karaa «red IPFS» Halkaas.
Hel oo wadaag hash ama wadiiqada ipfs buuxa ee faylasha (yada) iyo / ama galka (yada) raran, oo ka mid ah adeegsadayaasha shabakadda ee doonaya inay marin u helaan, iyada oo loo marayo 3-dhibic menu (…) kaas oo la socda walx kasta oo lagu rakibo gudaha «red IPFS».
Tijaabi marin u helida faylka (yada) iyo / ama galka (yada) raran, adoo adeegsanaya biraawsar web iyo waddo buuxa ipfs helay. Midkee, tusaale ahaan ahaan kara, inuu ka kooban yahay a 17MB faylka fiidiyowga taas oo aan soo galiyay, oo ah demo maqaalka:
Isku soo wada duuboo, sida aad u aragto hanaanku waa sahlan yahay, iyo «red IPFS» ku habboon tusaale ahaan soo rarista iyo wadaagga kheyraadka faylka (yada) iyo / ama galka (yada) in qaab kale aan loo wadaagi karin sababo la xiriira iswaafajin la'aanta qaababka, xaddidaadaha cabirka ama waxyaabaha gaarka u ah waxyaabaha ku jira
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan sida loo adeegsado buuggan aan caadiga ahayn Nidaamka Faylka ee Interplanetary lagu yaqaan magaca «IPFS», oo bixiya a Shabakad loo qaybiyey, hoosta a Borotokoolka P2P hypermedia in la sameeyo dhakhso badan, ammaan badan oo furfuran, in dhaqanka, uu yahay mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » IPFS: Sidee loo adeegsadaa Nidaamka Faylka ee Interplanetary ee GNU / Linux?
Nidaamyada LMS: Nidaamyada Maareynta Barashada Internetka
Time Popcorn: Nooc cusub oo beta ah 4.0 si looga daawado filimada iyo taxanaha khadka tooska ah